प्रमोद खरेलले आस्था राउत प्रकरणपछि किन ‘विचरो’ महसुस गरे ?
आस्था–रमिताको हात मिलाएको हँसिलो फोटो हेर्ने प्रमोदको चाहना
काठमाडौं । अत्यन्त चर्चित, लोकप्रिय र व्यस्त गायक प्रमोद खरेलले आस्था राउत प्रकरणपछि गीत/संगीत र कला क्षेत्र ‘शून्य’ र ‘विचरो’ अवस्थामा रहेको आफूलाई आभास भएको बताउनु भएको छ। आफ्नो फेसबुक वालमा लेख्दै खरेलले गायक/गायिकाको विषयमा बोल्ने एउटा पनि संस्था नभएको अनुभव गरेको तीतो पोख्नुभएको छ।
प्रमोद खरेलको स्टाटस
गायक÷गायिकाको विषयमा बोल्ने एउटा पनि संस्था नभएको अनुभव भयो हाल आएर । सेतुरामदेखि आजको दिनसम्मको इतिहास बोकेको यो राष्ट्रकै अभिन्न अंग भइसक्ने बेलामा पनि संस्थागतरुपमा शून्य नै रहेको आभास भयो अहिले।
केही दिनदेखि चर्चामा रहेको आस्था राउत प्रकरणमा सकारात्मक वा नकारात्मक ( समर्थन वा आलोचना) कुनै पनि टिप्पणी गर्ने गायक/गायिकाको संस्था नहुँदा करोडौ श्रोताले माया र स्नेह दिएको यो क्षेत्र नै विचरो अवस्था भएको आभास भएको छ।
अब विषयतिर लागौं (आस्था–प्रकरण)
गएको केही दिनबाट सामाजिक सन्जालमा भाइरल यो प्रकरणले आस्था राउतलाई पक्रने आदेश दिएको छ । जहाँसम्म लाग्छ, यो निर्णय बाहिरिएको सिसिटिभी फÞुटेज भन्दा पनि उनले फÞेसबुक लाइभमा दिएको अभिव्यक्ति र त्यसमा प्रयोग भएका शव्दहरु नै हुन् । जुन आफैमा केही अस्वाभाविक र कलाकारलाई असुहाउँदा नै छन् र देशमा कर्तव्य निर्वाह गर्ने प्रहरीका लागि निश्चय नै आपत्तिजनक हुन्, दुईमत छैन । जुन बारे स्वयम् आस्थाले नै स्वीकार गरी माफÞी मागिसकेकी छिन् । तर माफÞीले नपुगेरै होला प्रहरीले अनुसन्धानका निम्ति पक्राउ आदेश जारी गरेको र आस्थाले सिक्किमबाटै प्रहरीलाई सहयोग गर्ने बताइसकेकी छिन् । सिसिटिभी फÞुटेजमा अडियो छैन । दुबैले के बोले ? थाहा छैन । जहाँ दुबैको दोष हुनसक्छ । प्रहरीको चेकिङमा सहयोग नगर्ने आस्थाको कमजोरी हो, दुईमत छैन तर प्रहरीले पनि आस्थासँग गरेको व्यवहार कस्तो थियो ? त्यसमा भर पर्छ । उनी बिनाकारण नै रिसाइन त ? पक्कै पनि होइन । दिनभर ड्युटीले थकान भएर प्रहरीले यस्तो व्यवहार गरिन् होला भन्न पनि मिल्दैन । तसर्थ गल्तीको प्रतिशत जतिजति भएपनि अनुसन्धान दुईपक्षीय नै हुनुपर्छ, एकपक्षीय हैन यदि अघि बढ्ने नै हो भने ।
आम नागरिकको प्रहरीप्रतिको विश्वसनीयता, नागरिकप्रति प्रहरीको हातेमालो, अझ विगतदेखि नै कलाकारलाई प्रहरीले र प्रहरीलाई कलाकारले गर्ने व्यवहार पवित्र छ । एकाध व्यक्तिगत घटनालाई समग्र कलाकार र समग्र प्रहरी क्षेत्र जोडनु जोडाउनु दुर्भाग्य हुनेछ । सामाजिक सञ्जालमा कलाकार र प्रहरीका पक्षविपक्ष हुँदै ध्रुवीकरणतिर जाने र इख बटुलेर अघि बढ्ने हो भने त्यसले दीर्घकालीन फÞाइदा गर्दैन ।
आस्था यस घटनाबाट विक्षिप्त पक्कै छिन् । आम नागरिकसरह नै उनले पनि दण्ड भोग्लिन् नै । यसमा प्रहरी र निर्णयकर्ताले नै टुंगो लाउलान् । वा सामान्य पुछताछ पछि घटना सकिएला । र आस्थाले सार्वजनिकरुपमा माफी माग्दै घटनाको ‘द इन्ड‘ गर्लिन् । अब आस्थालाई थप मानसिक कमजोर बनाउनुको सट्टा सचेत र परिपक्व बनाउनुपर्छ । प्रहरीले यस्ता घटना नदोहोरिने वातावरण बनाउनु पर्छ । प्रहरीलाई नि हामीले काम गर्ने वातावरण बनाई दिनैपर्छ । केही समयमा नै आस्था र प्रहरी जवान रमिताको हात मिलाइँदै गरेको हँसिलो तस्वीर सामाजिक सञ्जालमा देख्न पाइयोस् ।
#आस्था प्रकरण #प्रहरी #कलाकार
लोकप्रिय गीतकार लोकराजको नयाँ गीत फेरि लोकप्रिय (भिडियोसहित)